Asus na -akwado ike batrị nke ZenFone 6 ga -eji bata | Androidsis
Zenfone 6 na -akpụzi ịbụ onye na -egbu flagship ụlọ ọrụ ọhụrụ. Mpepụ ekwentị gara aga kpughere na ọ ga -enwe ihuenyo na -enweghị ọkwa yana igwefoto n'azụ nwere okpukpu abụọ nke okpukpu abụọ dị ka igwefoto n'ihu.
Ụnyaahụ, Asus gosipụtara akụkụ dị mkpa nke ekwentị site na akaụntụ Twitter ya, ọ bụkwa ya ike batrị nke ga -akwadebe.
A nụrụ asịrị na Zenfone 6 nwere batrị 5,000 mAh, na ijide n'aka, onye nrụpụta Taiwanese n'onwe ya gosipụtara nke a. Ọkọlọtọ ASUS ọhụrụ, n'eziokwu, ga -enwe nnukwu batrị nke ikike ekwurula, nke na -eme ya ekwentị flagship nke abụọ bidoro n'afọ a yana batrị 5,000 mAh. Nke mbụ bụ Nubia Red Magic 3, nke a mara ọkwa na a Snapdragon 855 na njirimara ndị ọzọ dị elu na nkọwapụta.
5000> 1 + 7 + 3700, ya mere kedu ịhọrọ nkịtị mgbe ị nwere ike #DefyOrdinary? #ZenFone6 pic.twitter.com/x8R24953mS
- ASUS (@ASUS) Nwere ike 14, 2019
Asus abụghị naanị gosipụtara ike batrị, mana ọ kwara ihe ọchị OnePlus 7 n'otu oge ahụ. Nke a nwere batrị 3,700 mAh nke na -adịchaghị mma ma e jiri ya tụnyere Zenfone 6. Ọbụna batrị 4,000mAh n'ime OnePlus 7 Pro Ọ kwụsịrị n'azụ nke a, n'agbanyeghị na ọ pere mpe karịa ụdị ọkọlọtọ ya.
Asus na -ewere OnePlus 7 na ngwaọrụ ọhụrụ ya na, ka ọ dị ugbu a, o meriela na mpaghara ụfọdụ. Zenfone 6 'nwere nha ihu na ihu dị elu, ebe ọ na-ejikwa atụmatụ' enweghị ọkwa 'na' enweghị oghere 'karịa nke OnePlus, ọ dị ka. Ọ nwekwara jaakị ọdịyo, oghere kaadị microSD raara onwe ya nye (tray kaadị atọ), yana nnukwu batrị buru ibu, nke bụ ihe anyị kwurula n'elu. Anyị na -ama nzọ na ASUS ga -achọkwa imeri ma a bịa n'ịnye ọnụahịa.
ASUS Zenfone Max na Max Pro melite gam akporo achịcha
Ngwaọrụ a ga -amalite n'ime awa ole na ole. A ga -agbasa ihe omume a ka ị nwee ike kirie ya n'ịntanetị. N'ebe ahụ anyị nwere ike mata agwa ndị ọzọ nke flagship a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Asus kwadoro ikike batrị nke ZenFone 6 ga - eji bia